အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်မှုများပြားလာ
ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်မှုများပြားလာ
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများမှ မိမိနိုင်ငံမှ စက်ရုံများသို့ ပြန်လည်သွားရောက်
လုပ်ကိုင်မှု များပြားလာကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပုဂ္ဂလိက စက်ရုံများတွင် လုပ်အားခ တစ်လကို ကျပ်ငွေ ၈၀၀၀၀မှ ၁၀၀၀၀၀အထိရရှိခြင်းနှင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မြို့များတွင် လုပ်အားခ တစ်လကို ဘတ်ငွေ ၃၀၀၀မှ ၄၀၀၀အထိ ရရှိရန် အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့် ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံတွင်သာ ပြန်လည်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် သွားရောက်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
"အလုပ်သမားတွေက ပဲခူးနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံတွေ အလုပ်လုပ်ဖို့ ပြန်ကြတာများတယ်၊ တစ်ချို့ကျတော့လည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကို အသေချာမသိလို့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်လာကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အရင်ကတည်းက အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေကျတော့ ထိုင်းမှာရတဲ့လစာနဲ့ မြန်မာမှာရတဲ့လစာ သိပ်မကွာတော့ ပြန်သွားကြတာတွေများပါတယ်"ဟု မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား
များအရေး ဆောင်ရွက်နေသူ ကိုမိုးကြိုးက ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်၍ ရရှိသော လုပ်အားခနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း စားဝတ်နေရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် တရားဝင် ယာယီအလုပ်သမားပါ့စ်ပို့များ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို မကာမိသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ မြန်မာပြည်တွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုအခါ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် ပဲခူး၊ ရန်ကုန်ရှိ စက်ရုံများနှင့် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းများသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
"အခုထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းမှာဆိုရင် နေ့စားခ တစ်နေ့ကို ဘတ်ငွေ ၃၀၀ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကျတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိကြတဲ့အတွက် သွားပြီးမလုပ်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်၊ ထိုင်းငံထဲမှာဆိုတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သွားပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုမသိဘဲ လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်။ ပြီးတော့ ထားဝယ်ရေနက် ဆိပ်ကမ်းမှာက ထိုင်းနိုင်ငံလောက် အလုပ်သမားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ မကောင်းဘူးလို့ ကျနော်တို့သိရှိရပါတယ်"ဟု ကိုမိုးကြိုးမှ ဆက်ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်ပက်သက်၍ ဥပဒေများမှာ အလွန်တရာမှ တင်းကျပ်ပြီး၊ အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးထက် ထိုင်းနိုင်ငံသား အလုပ်ရှင်များ၏ အခွင့်အရေးမှာ ပိုမိုများပြားကြောင်း သိရှိရသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:10 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မည်သည့် ဆူပူမှုမျိုး အဓိကရုဏ်း မျိုး ကိုမျှ မလိုလားပါ စစ်မှန်သောဥပဒေဖြင့် အပြစ်ရှိသူများအားထိရောက်စွာ အရေးယူမှုမျိုးကိုသာလိုလားပါသည် ..
ဤသို့ ဆူပူမှုမျိုး များပြုလုပ်ရုံဖြင့် ကျုန်ုပ်တို့ မလိုလား
ရိုဟင်ဂျာကိုမြန်မာလူမျိုးစုစာရင်းထဲထည့်ဖို့ကိုလည်း လုံးဝလက်မခံပါ လူမျိုးရေးပဋိပခဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာသိမ်းမှာကိုလည်း လုံးဝ လုံးဝ လက်မခံပါကြောင်း တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းက ကျူးကျော်အစွန်းရောက်ဘင်္ဂလီများကိုဆန့်ကျင်ကြပါ
အာဏာရှငျတှေ ည၈နာရီရောကျတိုငျး ကွေးစညျသံကွား ခှေးမခံသာသလို ဗနျးထုသံကွား လဒမခံသာရအောငျ မောငျးကွဟေ့ ဟဲ့ခှေး ရှုးရှုး
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာ့ရိုးရာသိုင်းလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွေ ရှိပါတယ် အကယ်လို့ ထိရောက်တဲ့ ကိုယ်ခံပညာသင်ယူလိုပါက ဆက်သွယ်သင်ယူနိုင်ပါ...
စစ်သားပဲကွာ စစ်တိုက်ရင်းသေတာ ဘာဆန်းလဲ.. အသက်နဲ့ ခန္ဓာ လှူထားပြီးပြီမို့လား.. သေတော့ ဒါနမြောက်သွားတာပေါ့.. ဘာရေးကြီး ခွင်ကျယ်လုပ်နေရမှာလဲ.. သေ...
======================================== ကျော်ကြီး(MDY) ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းအရ ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆု...
(၁) ငါတို့ မြန်မာတွေကြည့်ေ နမှန်းသိလို့.. မြန်မာ-ဗီယက်နမ် ဘောလုံးပွဲထုတ်လွှင့်မှုထဲမှာ.. မင်းတို့ရဲ့ မီးရောင်ထိန်နေတဲ့ မြို့ကြီးတွေ လမ်းမြ...
လက်ရှိအစိုးရရဲ့ အကြီးဆုံးအတိုက်အခံ NLD ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှု ရလာဒ်တွေကို ပြန်ငဲ့ကြည့်ရင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ ဆန္ဒမဲ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အမတ် ၈၀ ရာခ...
ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးကန်ပတ်လမ်းရှိ X2O မဏ္ဍပ်ရှေ့တွင် ဗုံး(၃)လုံး ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁၅ ရက် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခန့်အချိန်က ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီးကန်ပတ်လမ်းရှိ X2...
ဆရာ မင်းသုဝဏ်၏ ဘဝနှင့် စာပေ စကား အား ဆရာ မင်းသုဝဏ် ကွယ်လွန်ခြင်း ( ၆ )နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်း
ဆရာ မင်းသုဝဏ်၏ ဘဝနှင့် စာပေ စကား မင်းသုဝဏ် [၁၉၀၉ - ၂၀၀၄] ရန်ကုန်တိုင်း ကွမ်းခြံကုန်း မြို့တွင် အဖ ကုန်သည် ဦးလွ...
မြန်မာ့ ဆံပင်ရှည်များ ဈေးကွက်ဝင်
မြန်မာ့ ဆံပင်ရှည်များ ဈေးကွက်ဝင် သူအိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူ့ဇနီးကိုတွေ့တွေ့ချင်း တခုခုတော့မှားနေပြီလို့ သူသိလိုက်ပါတယ်။ သူ့ဇနီးရဲ့ မျက်နှာအမ...
သူခိုးသား လကျအောကျငယျသားကို ဘယျလိုဆကျဆံလညျး
ကောကျကွကောကျကွ အာဏာရှငျသူပုနျခေါငျးဆောငျ သားက သူ့အဖေ ခိုးထားတာလေးတှေ စှနျ့ကြဲနပွေီ အဲ့ပိုကျဆံလေးတှနေဲ့ ကနြေပျမနကွေနဲ့ မငျးတို့ရဲ့ အနာဂါတျသာ...
Blog Archive February (2) October (2) September (3) August (4) June (2) May (1) April (1) March (7) February (11) January (15) December (13) November (20) October (20) September (34) August (45) July (41) June (23) May (60) April (34) March (56) February (62) January (77) December (73) November (110) October (51) September (53) August (64) July (43) June (52) May (45) April (6) March (9) February (39) January (54) December (46) November (13) October (24) September (30) August (28) July (7) June (36) May (39) April (23) March (6) February (18) January (38) December (47) November (63) October (35) September (46) August (40) July (35) June (36) May (68) April (65) March (8) February (5) December (2) November (1) September (1) June (4) May (1) March (1) February (3) December (6) November (3) October (4) September (7) August (2) July (4) June (3)
♣ ညီလေး....ရှစ်လေးလုံးအကြောင်း မမေ့ကောင်းသမို့ ပြန်ပြောင်းအမှတ်ရဖို့ရာ ဒီကဗျာ ရေးလိုက်တယ်။ ♣ ချောက် ရေနံတူးစင်အောက်သခင်ဖိုးလှကြီး လက်ရုံးမြောက်ခဲ့တဲ့၁၃၀၀-ပြည့်ရဲ့အရေးတော်ပုံ ရွှေရတုကြုံတဲ့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် သမိုင်းတွင်ရစ်မယ့် အုံကြွမှု လူထုရဲ့အသံခွပ်ဒေါင်းအလံမေ့ကျန်ထားလို့ရပါ့မလား။
♣ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် (၂၆) နှစ်တာခရီး ဖွဲမီးလို
တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွှမ်း သဘာဝ အရင်းမြစ်ခမ်း
ဆင်းရဲနွမ်းပါး မြန်မာပြည် တစ်ပါတီ ကြိုးနီစနစ်
ပုံဖေါ်ခြစ်ရေးဆွဲ ဖွတ်မွဲ ပြာချ... လူလုံးမလှ
♣ ဆန် ဆီ ဆား သကြား ငရုတ် ပဲပြုတ် အထည်လိပ်
တရိပ်ရိပ် တက်နေတဲ့ဈေးနှုံး အကြွေးလုံးခံနေရတဲ့ လူထုကြား နိုင်ငံရပ်ခြားက ရုပ်ဝတ္ထု စစ်အုပ်စုသာခံစားကြ
တရားမျှတမှု မဲ့ ကွာဟတဲ့ လူနေမှုစနစ် ချဉ်ပေါင်မျှစ် နဲ့
အသားငါး ဘတ်စ်ကား နဲ့ မာစီးဒီး ဇီးသီး နဲ့ ချောကလက်
တောအရက် နဲ့ ဘရန်ဒီ ရေနံဆီမီးခွက် နဲ့ နီယွန်မီးချောင်း
အဟောင်း နဲ့ အသစ် နှောင်းဖြစ် နဲ့ ခေတ်ပေါ်
♣ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ကြို့ကုန်းလ္ဘက်ရည်စားပွဲခုံက
မဟုတ်ဘူး လက်တဆုပ်စာ အာဏာရှုး စစ်ဘီလူးတွေရဲ့ စနက်
၈၇- စက်တင်ဘာ(၅)ရက် ငွေစက္ကူတွေ လုယက်မှု
သွေးပျက်နေတဲ့ လူထုကိုယ်စား သမိုင်းမှာ ရှိထား
ကျောင်းသားထု အားမာန် အသစ်တဖန်....ဒေါင်းအလံနဲ့
♣ မြန်မာပြည်သမိုင်းနဲ့ ကျောင်းသားရဲ့သမိုင်း
ဒင်္ဂါးဝိုင်းရဲ့ “ခေါင်း” နဲ့ “ပန်း” ခွဲခြမ်းဖျောက်ဖျက်
ကွယ်ဝှက်လို့ မရ အတူတကွရှိခဲ့တယ် ညီလေး။
♣ ကျောင်းသားဆိုတာ ကိုလိုနီခေတ်ကျွန်အဖြစ်မှ
ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး အမျိုးသားအရေးတွေ ရှေးရှု့
လူထုမှ ပေါက်ဖွား အသွေး အသား အသက်
သမိုင်းရဲ့ တောင်းဆိုချက် လိုက်အပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီစွာ
ပေးဆက်လာ အစဉ်မြဲ ဦးခေါင်းသွေးစိမ်းရဲပေမဲ့
♣ ကျောင်းပရ၀ုဏ်ထဲ သေနတ်ကြဲတတ်တဲ့ စစ်တပ်ကြောင့်
၈၈-မတ်(၁၃)ရက် စက်မှုက ကိုဖုန်းမော် အသက်ထွက်
တပါတီ တခန်းရပ်မဲ့အစပေါ့။ အင်းလျားကန်ဘောင်ရိုးဆီက
တံတားနီ အဖြစ်အပျက် ၈၈-မတ်(၁၆) ရက်
တဆက်တည်းဘဲ ဇွန်လထဲ မြေနီကုန်း တဘုန်းဘုန်း ပစ်ခံရ
သွေးမြေကျခဲ့ ခွပ်ဒေါင်းများ ပေးဆက်သွားသူရဲ့ တွန်ကျူးသံ
♣ ၆၂-ဇူလိုင်(၈)ရက် ဦးနေ၀င်းနူတ်က မြွက်
နံနက်ခင်းအသံလွင့်သွား ပြည်သူကို စော်ကား
“ဒါး ကို ဒါး နဲ့ လှံကို လှံနဲ့ ရင်ဆိုင်ပါမယ်” တဲ့
ဒါနဲ့အားမရနိုင် ၈၈-ဇူလိုင်(၂၃)ရက်မှာ “စစ်တပ်ဆိုတာ မိုးပေါ်ထောင် မပစ်ဘူး ပစ်ရင်တည့်တည့် ပစ်တယ် မှန်အောင်ပစ်တယ်” ဂန္ဓ၀င်တွင်ရစ်မဲ့ စကား ပြည်သူများအတွက်
♣ ကျောင်းသားကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး
♣ မ.ဆ.လ တပါတီစနစ်
၈၈-စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက် ညနေခင်း
န.၀.တ ဆိုတာ ပေါ်ထွက်။
(ဒီကနေ့ န.အ.ဖ အထိ)
ကျွေပွန်ကြပါညီလေး။ ........ ။
Copyright (c) 2010 အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ. Design by WPThemes Creator
Blogger Templates And TM Web Design.